सचेत भए काठमाडौं उपत्यकाका घरबेटी – Khabarhouse
सचेत भए काठमाडौं उपत्यकाका घरबेटी
Khabar house | १८ बैशाख २०७७, बिहीबार ०८:२३ | Comments
काठमाडौं । के तपाईं उपत्यका बाहिर घर भई लकडाउन अवधिमा काठमाडौं आउन खोज्नुभएको छ ? अथवा, लकडाउन छल्दै काठमाडौं आउनु भएको छ ? यदि, त्यस्तो हो भने विचार पु¥याउनुस्, तपाईंलाई घरबेटीले सहज रूपमा घर प्रवेश गर्न दिनेछैनन् । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
को;रोना भाइरस नियन्त्रणका लागि सरकारले लकडाउन गरे पनि काठमाडौं उपत्यकामा मानिस धमाधम आउन थालेपछि घरबेटीले आपू र छिमेकीको स्वास्थ्यको ख्याल गर्दै यस्तो कदम चालेका हुन् । घरबेटीको यो कदमलाई प्रहरीले साथ दिएको पाइएको छ ।घर बेटीहरूले सिधै घरमा पस्न नदिई अस्पताल जान सुझाव दिन थालेका छन् । अटेर गरेको खण्डमा प्रहरीको समेत सहयोग लिन थालिएको छ ।
‘आरडीटी टेस्ट’ को रिपोर्टपछि मात्रै घरबेटीले भाडावाललाई घर प्रवेशको अनुमति दिन थालेका छन्। धादिङका रामचन्द्र ढुंगाना लकडाउनकै अवधिमा काठमाडौं आएका थिए । सिनामंगलमा कोठाभाडामा बस्दै आएका उनलाई घरबेटीले घरमा प्रवेश गर्न दिएनन् । र, उनी मंगलबार प्रहरीको रोहवरमा शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकु पुगे । आरडीटी टेस्टका क्रममा नेगेटिभ रिपोर्ट आएपछि मात्रै उनले कोठामा प्रवेश पाए ।
सप्तरीबाट काठमाडौं फर्किएका राहिर हुसेन पनि सिधै कोठामा जान पाएनन्। घरबेटीले प्रवेश नदिएपछि आरडीटी टेस्टका लागि उनी टेकु अस्पताल गए। अस्पतालको रिपोर्टपछि मात्रै उनलाई कोठामा प्रवेश दिइएको छ। अहिले मुख्यतः अन्यत्रबाट काठमाडौं फर्कि एका र कोठाभाडामा बस्दै आएकाहरूको भीड टेकुमा देख्न सकिन्छ । लकडाउनको अवधिमा कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम हुने भन्दै कतिपय घरबेटी कोठा भाडामा बस्दै आएकाहरूसँग त्रसित हुन थालेका छन् ।
उनीहरूले लकडाउनको अवधिमा घरबाट फर्किए नजिकैको अस्पतालमा गएर को;रोना परीक्षण गरेर मात्रै कोठामा फर्किन आग्रह गर्ने गरेको पाइएको छ । दैनिक ५० जनासम्म आरडीटी टेस्टका लागि टेकु अस्पताल पुग्ने गरेको अस्पतालका निर्देशक डा. सागरराज भण्डारीले बताए । उनले भने, ‘अहिले काठमाडौंमा घरबेटीहरूले चेक गरेर आउनू भन्छन् । नत्र घरमा पस्न पाउनुहुन्न जानुस् भनेको पाइएको छ ।
यसैकारण, दैनिक ४० देखि ५० जनासम्मको आरडीटी टेस्ट हुने गरेको छ।’ हालसम्म ५४ हजार ८ सय २६ जनाको कोरोना परीक्षण गरिएको छ । आरडीटी प्रविधिमार्फत ४४ हजार १९ जनाको र आरटी–पीसीआर विधिमार्फत १० हजार ८ सय ७ जनाको परीक्षण गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै, २२ हजार ९९ जना क्वारेन्टाइनमा बसेका छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार उपत्यकाभित्र चार जना र बाहिर १ सय तीन जना आइसोलेसनमा उपचाररत छन। आरडीटी टेस्ट गरेकाहरुको रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि घरबेटीले प्रवेश दिए पनि विज्ञहरुले आरटी–पीसीआर विधि नै कोरोना परीक्षणका लागि उपयुक्त हुने बताउँदै आएका छन् ।